Mwaka webasa basa rekufambira mberi - "Potato System" magazini
Mwaka webasa remunda kufambira mberi
Sekureva kwedhipatimendi rekushanda kwemasimba ekutungamira eiyo agro-maindasitiri akaumbwa enzvimbo dzeRussian Federation, kubva munaJune 4, 2021, kudyara kwematsutso munyika seyakaitwa munzvimbo yemamirioni makumi mana nemazana mana. mahekita, kana 49,4% yenzvimbo inofungidzirwa.
Zvirimwa zvezviyo zvemuchirimo munyika yose zvinodyarwa panzvimbo inosvika mamirioni gumi nemanomwe mahekita, kana 28,8% yenzvimbo inofungidzirwa. Pane idzi, gorosi remuchirimo rakadyarwa panzvimbo inosvika mamirioni 98,4 mahekita, kana 12,8% yenzvimbo yakafungidzirwa, bhari yemuchirimo - 101,3 mamirioni mahekita, kana 7,3% yenzvimbo inofungidzirwa, chibage chezviyo - 94,4 miriyoni mahekita, kana 2,9 % yenharaunda yakafungidzirwa, mupunga - 103 zviuru mahekita kana 180,4% yenzvimbo inofungidzirwa.
Shuga beet (fekitori) inodyarwa pane imwe nzvimbo inopfuura 1 miriyoni mahekita, kana 95,8% yenzvimbo inofungidzirwa.
Yakareba filakisi firakisi yakadyarwa panzvimbo ye40,3 zviuru zvegumi kana 84,2% yenzvimbo inofungidzirwa.
Zuva rekudyara rinodyarwa panzvimbo yemamiriyoni mazana manomwe nemakumi manomwe nenhatu, kana 8,9% yenzvimbo inofungidzirwa.
Kubatwa chibharo kwakasimwa padunhu remamiriyoni 1,3 mahekita, kana 108,2% yenzvimbo yakatarwa.
Soya inodyarwa panzvimbo ye2,5 miriyoni ha, kana 82,1% yenzvimbo inofungidzirwa.
Mbatatisi mune emabhizinesi ezvekurima uye varimi (varimi) mapurazi akadyarwa panzvimbo ye248,8 zviuru mahekita, kana 85,6% yenzvimbo inofungidzirwa.
Miriwo mumabhizimusi ezvekurima uye varimi (varimi) vemabhizimusi akadyarwa munzvimbo mahekita zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nemashanu, kana 156,3% yenzvimbo inofungidzirwa.
Source: Ministry of Agriculture yeRussian Federation
Tags: kudyara mbatatisi
Izvozvi zvava nyore kuti zvigadzirwa zvepurazi zvipinde mu "Magnet"